Malunga Nathi-Hebei Yiman Lanhua International Import & Export Co., Ltd.
I-Hebei Yiman Lanhua International Import & Export Co., Ltd. yinkampani edibanisa uphuhliso, imveliso, intengiso kunye namalungelo okungenisa elizweni azimeleyo kunye nolawulo lokuthumela ngaphandle, igxile ekushicileleni ilaphu kunye neshishini lemichiza elinxulumene nokudaya.
Ukusukela kwisiseko ukuza kuthi ga ngoku, inkampani ibisoloko ibambelele kwifilosofi yeshishini “yokubonelela ngeemveliso ezifunekayo kubathengi kunye neenkonzo njengeyona nto iphambili, umgangatho wemveliso njengelitye lembombo, ubambelela kumgaqo woshishino woMthengi”.
Ukuze siqhubeke siphuhlisa kwaye sikhonze abathengi, senze enye imowudi elungiselelweyo yokudaya ikhonkco lokubonelela ngemveliso: Iseti yesisombululo semveliso yokulungiswa kwangaphambili, ukuprintwa kunye nokudaya, ukusetyenzwa emva kokuprintwa kwempahla kunye nokudaya.Ukuphucula ngokugqwesileyo ukuhambelana kwemveliso yeekhemikhali ezahlukeneyo kwimeko apho ingxaki kulula ukwenzeka kwinkqubo yokudaya.
Inkampani ilawula ngokungqongqo umgangatho wemveliso kunye nolawulo lokusingqongileyo, iphumelele isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO 9001.Ngaphandle koko, iNkampani iyinkokeli kukhuseleko lwendalo esingqongileyo, kwaye iqhube ngokulandelelana isiqinisekiso se-ECO-PASSPORT, i-ZDHC Gateway, kunye nesatifikethi se-GOTS.
Iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwimarike yasekhaya China, kwakunye kwiimarike zamazwe ngamazwe ezifana Indonesia, Bangladesh, Indiya, Malaysia, Vietnam, Pakistan etc. ebekwe Asia, Turkey, Spain eYurophu, Guatemala kuMntla Melika.
I-Acrylic Seaping Agent, T Shirt Elastic White Silk Ink, Abancedisi beMichiza, Ubushushu obuphezulu bePigment, Hlamba-Sisasazekile Thickener, Ukukhupha Cola iBinder,